Oromia: Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu: Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarra | OromianEconomist
Oromia: Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu: Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarra	December 5, 2015
Tags: #OromoProtests 2015, Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarra, KFO’n haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti ibsa baase.
Hidhaa fi Ajjeechaan Qabsoo Oromoo yo Finiinse Malee Duubatti hin Deebisu!
Ibsa Ijjannoo Gurmuu Deeggarsa KFO Idil-Addunyaarraa
Haalli Itoophiyaa keessa jiru yeroorrraa gara yerootti hammaachaaa dhufeera. Keessattuu yeroo ammaa kanatti gama tokkoon uummanni beelaan dhumaa yennaa jiru kanatti gama biraatiin ammo mootummaan daa’imman ilmaan Oromoo hegeree biyyaa ta’an rasaasaan fixaa jira. Dhimmoota maasterpilaaii, beelaa fi ajjeechaa fi hidhaa mormitoota Oromoo irratti gaggeeffamu ilaalchisuun ibsa armaan gadii kana baasneerra.
1. Gocha Faashistummaa mootummaan Woyyaanee saba Oromoorratti raawwatu ni balaaleffanna. Hidhaa , reebichaa fi ajjeechaan hatattamaan haa dhaabatu! Mirgi hiriira nagaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu haa kabajamu!
2. Bara 2014 keessa barattoonni 75 ol ajjeefaman. Amma torbaanuma kana keessa namni 3 ol ajjeefamanii dhibbootaan madaahaniiru. Miidhaan cimaan barattoota Oromoorra gahaa jira. Sanbi keenya kumootaan mana hidhaatti guuramaa jira. Namoonni ajjeechaa barattootaa fi hiriirtota irratti raawwatan hatattamaan seeratti haa dhiyaatan! Maatii ijoolleen irraa ajjeefamteef gumaan haa kaffalamu!
3. Karoorri Masterpilaanii Finfinnee kan seeraa fi heera biyyittii diiguu; kan sirna Federaalizimii fi birmadummaa sabootaa dhabamsiisuu fi eenyummaa saba keennaa miidhuurratt aggaammate hatattamaan haa haqamu.
4. Beelli biyya san keessatti dhalate sababa hongee qofa osoo hin taane sababa poolisii fi tarsiimoo dogoggora fi dhaba bulchiinsa gaarii fi olaantummaa seeraa ti jennee amanna. Uummata beela’eef gargaarsi barbaachisaan hatattamaan haa dhaqqabu.
5. Uummanni Oromoo biyya keessa jirtanu gaaffii mirgaa fi bilisummaa gaafachaa jirtan hanga mirgi keessan kabajamutti karaa nagaatiin kaabaa kibbaa, bahaa dhihaa, dhiiraa dhalaan fi diqqaa guddaan qindoominaan bakka maraa wolbira dhaabattanii akka itti fuuftan fi mirga keessan kabajsiifattan waamicha keenna dabarsina.
6. Hidhattoonni, loltoonnii fi poolisoonni gaafatamummaan keessan heeraa fi seera kabajsiisuu dha. Keessattuu humni woraanaa daangaa diinarraa ittisuu dha. Uummata mirga heeraa fi seeraan taa’e gaafatu irratti hin dhukaasinaa; hin ajjeesinaa. Mootummaan ni dhufa ni darba. Isin mootummaa kamuu keessa dhaabbataa teetanii kan jiraatuu dandeessan sirna tokkoof looguu dhiistanii heeraa fi seera qofa yo kabajsiistan.Mootummaan abbaa irree akka isin isa tiksitanii umriisaa dheeressitanuuf barbaada; kanaafuu akka isin uummata isa mormu ajjeestan isin ajaja. Ajaja isaa kan seeraan alaa hin fudhatinaa! Uummata gaaffii mirgaa karaa seeraa fi nagaatiin gaafatu irratti qawwee akka hin dhukaasne waamicha isiniif taasifna.
7. Sabni keenya kan biyya alaa jiraattan haala barbaachisu maraan hatattamaan wolitti dhuftanii obbolummaa fi deeggarsa gaaffii mirgaa uummanni keenya kaasu kana bira dhaabbachuudhaan dirqama lammummaa akka baatan waamicha isiniif taasifna.
8. Dhaabbileen siyaasa Oromoo fi gurmuuleen deeggarsa qabsoo Oromoo marti yeroo murteessaa ta’e kanatti gahee isinirra eegamu harka wol-qabattanii tokkummaadhaan akka baanu waamicha isiniif goona!
9. Dahaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaaleen idil-addunyaa yakka Itoophiya keessatti Oromoorratti deemaa jiru kana xiyyeeffannaa itti kennitanii akka gabaasitanii fi galmeessitan, addunyatti beeksiftan waamicha isiniif gooona!
10. Lubbuu gaafii kanarratti woreegamteef biyyoon itti haa salphatu. Maatii fi firoottan woreegamtootaa jajjabinna isiniif hawwina. Miidhamtoonni gaaffii mirgaa kanarratti miidhamtan fayyaa isiniif hawwina. Lubbuu fi dhiigni keessan bilaashaa miti. Akkuma Maammoo Mazammir ‘’ DHIIGI KIYYA DHIIGA BILAASHA BADEE MITI, DHIIGA MIRGA OROMOOTIIF JIGE’’ jedhe san dhiigi keessan gootota kumaatama dhala; BILISUMMAA FIDA. Woreegama keessan SEENAAN HIN DAGATU. SEENAAN keessan ni galmaawa; hanga bara baraa galmee seenaa keessaa calaqqisa.
Dhumarratti Koongiressiin Federaalawa Oromoo (OFC) ijoollee miidhaman, hidhamanii fi maatii ijoolleen irraa ajjeefamte haala itti gargaaraman mijeessuuf koree hatattamaa dhaabuusaa nuuf ibseera. Kanumaan wolqabatee nuuti Gurmuun Deeggarsa KFO Idil Addunyaa deeggarsa barattootaa fi miidhamtoota Oromoof taasifamu biyyoota alaattii guurree OFCn dhaqqabuuf qophii xumurreerra. Hawaasni Oromoo biyyoota garaa garaa dhimma kanarratti akka nu woliin hojjatu waamicha taasifna.
Gurmuu Deeggarsa Kongiressii Federaalistii Oromoo
Muddee 3, 2015